DEA TAARIIKHDA KAMA DAMBEYSTA AH: 26 JUUN 2018
TAARIIKHDA SOO SAARISTA: 27 MAAY 2018
MAGACA JEGADA: KAALIYAHA MADAXA ARRIMAHA SIYAASADDA
QAYBTA: GUDDIGA ARRIMAHA SIYAASADDA IYO DHEXDHEXAADINTA (PAMG)
LAMBARKA OGEYSIISKA SHAQADA BANNAAN: UNSOM/PAMG/028 /2018
Booskan waxaa la maalgelinayaa muddo hal sano oo kaliya, waxaana suuraggal ah in la muddo kordhin lagu sameeyo. Magacaabista booskan waa mid maxalli ah. Qofka shaqada raadsanayo ayaa mas’uul ka ah dhammaan kharashka ka bixi doona si uu ula wareego shaqadan. Dhammaan dadka soo codsanayaa waxaa si weyn loogu boorrinaya in ay codsigooda ku gudbiyaan habka online-ka (internet-ka) sida ugu dhaqsiyaha badan iyo ka hor inta aan la gaarin taariikhda kama dambeysta ah ee kor ku xusan.
Dadka jecel in ay codsadaan shaqadan kuwaas oo haatan la shaqeeyo qandaraasleyda QM iyo Qandaraasleyda Kale waa in ay fuliyaan waajibaadyada heshiiska ay la galeen qandaraasleyda QM si ay u noqdaan dad u qalma in ay codsadaan booskan bannaan.
Booskan waxaa uu ka bannaan yahay Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ee Jowhar. Xil-hayaha waxaa uu hoos imaan doonaa Madaxa Xafiiska ee Beledweyne.
Kaaliyaha Madaxa Arrimaha Siyaasadda waxaa uu mas’uul ka yahay waajibaadyada soo socda:
In uu uruuriyo, xulo uuna falanqeeyo macluumaadka ku jira qoraallada iyo daabacaadyada laga helo ilaha kala duwan, oo ay ka mid yihiin saxaafadda.
In uu si weyn uga war haayo guud ahaan dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadeed, gaar ahaanna saameynta ay ku leeyihiin waddamada iyo waajibaadyada khaaska ah ee uu shakhsiga u xil saaran yahay.
In uu si dhow ula socdo arrimaha ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka ka dhaca goobta uu ka shaqeeyo, uuna talo siiyo Mas’uuliyiinta Sare iyo shaqaalaha kale ee ka tirsan hawlgalka, iyo meelaha kale ee ku sugan Xog-haynta markii loo baahdo.
In uu la socdo isbeddellada dhinaca siyaasadda ee heer qaran iyo heer gobol, uuna talooyin siiyo hay’adaha ka hawlgala goobta/hay’adaha Qaramada Midoobay ee ka hawlgala goobta.
In uu xiriir dhowr oo ku aaddan isku-duwidda iyo arrimaha siyaasadeed la yeesho waaxyada kale ee Qaramada Midoobay, iyo hay’adaha caalamiga ah, iyo dowladaha.
In uu la socdo tallaabooyinka ay qaadayaan urur goboleedyada, hay’adaha Qaramada Midoobay, hay’adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn.
In uu xulo, kala sooco kuna kaydiyo kombayuutar macluumaadka la xiriira isku dhacyada iyo khilaafaadka suurtagalka ka ah ee waddamada ama gobolka loo xil saaray.
In uu ka qayb-galo hawlo xaqiiq raadin ah iyo hawlaha kale ee goobta loo xil saaray.
In uu diyaariyo kulamada Ergayga Gaarka ah ee Xog-Hayaha Guud ee Qaramada Midoobay iyo Ku Xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Xog-Hayaha Guud ee Qaramada Midoobay ay la yeelanayaan Madaxda dalka marti galiyay.
In uu qabto waajibaadyada kale la xiriira marka loo baahdo.
Xilkasnimada: In uu ku faano shaqadiisa iyo guulaha; in uu muujiyo xilkasnimo iyo in uu aqoon buuxda u leeyahay shaqada; In uu yahay qof feejigan oo ku wanaagsan ka soo bixidda ballanqaadyada, in uu dhowro muddada kama dambeysta ah uuna ku guuleysto natiijooyinka; halkii uu dhiiriggelin ka heli lahaa arrimo shaksiyeed oo asaga u khaas ah in uu dhiiriggelin ka helo arrimo ku saabsan shaqo; in uu dhabar-adeyg muujiyo markii uu la kulmo dhibaatooyin ama caqabado; In uu noqdo qof deggan markii ay asiibto xaalado walaac ku abuura; in uu isa saaro mas’uuliyad in uu tixgeliyo arrimaha jinsiga uuna xaqiijiyo sinnaanta dhinaca ka qayb-galinta dumarka iyo ragga ee dhammaan shaqooyinka.
Xiriirka: In uu si wanaagsan oo fasiix ah u hadli karo waxna u qori karo; In uu dhagaysto dadka kale, in uu si sax u fasirto farriimaha dadka kale uuna si habboon uga jawaab celiyo; In uu su’aallo weydiiyo si uu u helo faham sax ah, iyo in uu muujiyo in uu daneynayo wada-hadal labo dhinac ah; In uu saxo luuqadda, codka, habka iyo qaabka uu u hadlayo, si waafaqsan dadka dhageysanayo; In uu muujiyo furfurnaan dhanka is dhaafsiga macluumaadka iyo in uu mar kasto wargeliyo dadka.
Wadashaqeyn: In uu si wadajir ah ula shaqeeyo saaxiibbadiisa si loo gaaro yoolka hay’adda; In uu talooyinka uruuriyo asaga oo si dhab ah u qiimeynayo fikradaha iyo khibradaha dadka kale; in uu yahay qof diyaar u ah in uu dadka kale wax ka barto; In uu danaha kooxda uu ka horumariyo danaha shakhsi; In uu taageero uuna ku dhaqmo si waafaqsan go’aanka kama dambeyska ah ee kooxda, xata haddii go’aannadaas ay ka duwan yihiin mowqifkiisa; in uu amaanta guulaha la gaaray uu la qaybsado kooxda uuna aqbalo in uu qayb mas’uul ka yahay dhammaan waxyaabaha ay ka gaabisay ama ku fashilmeen kooxda.
Waxbarasho: Shahaado Sare ee Jaamacadeed (Master-ka iyo wixii u dhigma) dhinaa Sayniska Siyaasadda, Maamulka ama Horumarinta ama wixii la xiriira. Shahaadada jaamacadda ee heerka koowaad iyo labo sano oo shaqo ah waa la oggolaan karaa beddelka shahaaddada sare ee jaamacadda. Tababar xirfadeed ee dhinaca qorshaynta, kormeerka iyo qiimeynta, abaabulka iyo/ama isku duwidda waxa ay sare u qaadayaan fursaddaada.
Khibrad: Ugu yaraan labo (2) sano oo uu qofku khibrad wax ku ool ah ka helay sayniska siyaasadda, xiriirka caalamiga, sharciga, hubka dhigista, amniga, maamulka horumarinta, xallinta khilaafaadka, iyo wixii la xiriira.
Luuqadda: Ingiriis iyo Faransiis ayaa ah luuqadaha shaqada ee Qarammada Midoobay. Waxaa loo baahan yahay qof fasIIx ku ah luuqadaha Ingiriiska iyo Af-Soomaaliga (hadal iyo qoraalba).
Qiimeynta: Qiimaynta dadka u qalma boosaskan ayaa waxaa ka mid noqon karaa layli qiimeyn ah kaas oo ay daba socon doonto warreysi ku saabsan kartida.
Dadka u qalma shaqadan waxaa ay ku soo gudbin karaan codsiyadooda oo ay qayb ka tahay foomka Taariikhda Shakhsiyeed ee Qaramada Midoobay (P.11) cinwaanka hoose markii la joogo ama ka hor taariikhda kama dambeysta ah. P11 waxaa aad ka heli kartaa https://unsos.unmissions.org/jobs. Codsiyada la soo gudbiyo kaddib wakhtiga kama dambeysta ah ee ah 26 Juun 2018-ka lama aqbali doono. Warqadaha taarikh nololeedka dadka (CVs) lama aqbali doono.
Email-ka: [email protected]
Fadlan Lambarka Ogeysiiska Shaqada Bannaan iyo Jegada Shaqada ka dhig cinwaanka email-ka.
Fadlan ku lifaaq nuqulka P11, Shahaaddada Jaamacadda, Baasaboor ama Teesaraha Aqoonsiga. Ku lifaaq nuqulka Liisinka Daraawalnimada oo sax ah. Fadlan ogow in Shahaadooyinka Waaxda Dembi Baarista (CID-da) iyo Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda (NISA) loo baahan doono qaybaha dambe ee hannaanka shaqaaleynta.
QARAMADA MIDOOBAY MARNABA MA QAADATO WAX LACAG AH INTA LAGU GUDO JIRO HANNAANKASHAQAALEYNTA (CODSIGA, KULAN WAREYSIGA, DIYAARINTA AMA TABABARKA)
Previous articleUNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) launches Job for: FIELD LANGUAGE ASSISTANT
Next articleUNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN SOMALIA (UNSOM) launches Job for: ASSOCIATE POLITICAL AFFAIRS OFFICER
Somali President’s Loathing War On Media Is Dangerous, Journalists Say
Ethiopian army delivers shipments to Somalia traversing dangerous routes filled with...